Xisbi siyaasadeed oo lala xiriirinayo Ababu oo la diiday in la diiwangalyo – The Voice of Northeastern Kenya
Xisbi siyaasadeed oo lala xiriirinayo Ababu oo la diiday in la diiwangalyo
Diiwangalyaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka haweeneyda lagu magacaabo Lucy Ndung’u ayaa waxa ay diiday in ay diiwan galiso xisbi cusub oo lala xiriirinaayo xildhibaanka laga soo doortay deegaan barlamaneedka Budalangi, Ababu Namwamba.
Waraq qoraal ah oo ay Mrs Ndung’u u dirtay dadka soo codsaday in loo diiwangalyo xisbigaas ayaa waxa ay ku sheegtay in xafiskededa uusan diiwan galin doonin xisbiga lagu magacaabo Federal Democratic Alliance of Kenya ilaa iyo inta arrimahooda ay ka soo xalinaayan.
Xoghayaha guud ee xisbiga kale ee lagu magacaabo Federal Party of Kenya Kennedy Okelo ayaa su’al ka keenay diiwangalinta xisbigan cusub ee lala xiriirinaayo xoghayihi guud ee hore ee xisbiga ODM Ababu Namwamba waxa uuna Mr Okelo sheegay in xisbigaan aan la diiwangalin Karin maadama ay wataan magaca xisbigiisa.
Xerka u dagsan xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa waxa uu dhigayaa in xafiiska diiwangalyaha xisbiyada dalka u diidi karo in uu diiwanka ku daro xisbi kasto oo aan ka soo bixin shuruudaha u dagsan xisbiyada dalka oo ay kamid yihiin in magaca xisbiga doonaya in la diiwangalyo iyo astaanta u doonayo in u isticmaalo aysan u ee kaanin kuwa xisbiyada kale ee diiwangashan.
Waxa la sheegaya in Ababu Namwamba oo ahaan jiray xoghayaha xisbiga ODM in uu dadaal dheer ugu jiro sida loo diiwangalin lahaa xisbigaas cusub ee Federal Democratic Alliance of Kenya.
← Imaamyada muslimiinta dalka oo billaabay in ay la dagaalamaan xagjirnimada ardayda
Booliska Kenya iyo Ugandha oo iska kaashan doono sugidda amaanka jazeeradda migingo →